Top 10 Free Best QuickTime Movie Editors
1. Tilmaamaha QuickTime
4. QT koronto-in
7. isjiidka Download
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa kuu sheegaysa Tifaftirayaasha 10ka FREE oo ugu wanaagsan ee filimka QuickTime. Dhammaan iyaga ka mid ah waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Waxaad dareemi kartaa si xor ah u xaalkaa aad QuickTime videos.
QuickTime Player waa video editor kaamil ah haddii aad u baahan tahay oo kaliya qaar ka mid ah hawlaha video tafatirka aasaasiga ah sida falinjeeerka, qoqobada, ama isku video clips. Iyadoo feature video falinjeeerka ah, oo aad ka saari karto qayb ka mid ah aadan rabin in u tag oo la doonayo qaybo video. Sidoo kale waxaad isku dari kartaa 2 ama in ka badan clips oo iyaga ku milmaan mid.
2.Avidemux (Windows & Mac & Linux)
Avidemux furan yahay il-QuickTime editor movie ah. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan sida video AVI, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MOV, 3GP isticmaalaya noocyo kala duwan oo codecs. Waa muuqaal ah editor si sahlan loo isticmaalo si aad u hesho goynta, shaandhaynta iyo hawlaha Deji la gaadhay. Muuqaal kale oo waa weyn yahay in aad qalabayn karto hawlaha adiga oo isticmaalaya mashaariicda iyo safka shaqada.
Jahshaka leeyahay video iyo awoodaha tafatirka audio of software heer xirfadeed, iyo taageertaa qaabab video kala duwan. Waxay qaban karo-waqtiga dhabta ah compositing 3D iyo Flash animation (ilaa 32k layers matte); OpenGL-rinjiga; oo ku jihaysan qoraalka ah. Waxaa jira sidoo kale qaybood hagaajinta midabka, keying, iyo raadraaca, iyo diyaariyeen ah ee taageerada saxaafadda.
iMovie taageertaa MOV, 3GP, MPEG, MP4, M4V iyo mod sidii qaabab aqbasho. Sida Windows Movie Kan sameeyey, waxaad u isticmaali kartaa si resize QuickTime video, shaandheyn QuickTime video, QuickTime dalagga video, ama ku darto kala guurka si aad video, iwm Waxaa kale oo ay bixisaa arrimo trailer kala duwan si aynu aad si deg deg ah loo abuuro isjiidka xiiso leh ka footages aad. Marka tafatirka la sameeyo, waxaad si toos ah u geliyaan aad video to Facebook, YouTube, vimeo, iyo CNN iReport.
HyperEngine-AV ka mid yahay moviemakers iyo shaqaale badan oo digital caan ah. Waxaad isticmaali kartaa tan QuickTime editor filimka lacag la'aan ah si ay u abuuraan muujinaya slide, filimada qoyska ama bandhig ganacsi oo ay isku muuqan video, sawiro, dhawaaqa iyo qoraalka wada. Video saarka waa in tayada DV sare. Xataa waxaad ka dalban kartaa daraasiin saamaynta video ay u astaysto QuickTime video clips.
6. Windows Movie Kan sameeyey (Windows)
Kan sameeyey Window Movie ayaa suuqa ugu sanado badan nidaamyada Window si aynu aad si fudud xaalkaa QuickTime video. Waxaad isticmaali kartaa inuu isku shaandheyn QuickTime video, resize QuickTime video, ama dalagga, zoom, ku dar horyaalka, kala guurka iyo Dhibaatooyinka kale ee ay u clips aad. Software ayaa sidoo kale gali karaan files audio la kuwan raadkaygay video ay soo saaraan remixes video. Ayaa ah qaabab video taageeray waxaa ka mid ah MOV, wmv, AVI, MP4, M4V, 3GP iyo in ka badan.
VSDC waa QuickTime video editor lacag la'aan ah, laakiin waxa ay u muuqataa waxaana uu dareensan yahay sida kaliya hal xirfad leh. Ayaa ah qaabab video taageeray waxaa ka mid ah MOV, MP4, AVI, MKV, Mpg, wmv, FLV iyo in ka badan. Waxaa jira sida diirada kala duwan, codad, waxa ay barbaro galeen iyo qalabka doorashada. Laakiin waxa dhib noqon kara bilowga ah inay ka adkaadaan dhammaan xilalkii video tafatirka.
8. vimeo Video Editor (Waayo, iPad, iPhone & iPad Touch)
Vimeo waa kaamil ah ilaalinta, maaraynta iyo ogaadeen videos online ma aha oo kaliya. Waxa kale oo ay noqon kartaa qalab weyn tafatirka QuickTime video aad iPad, iPod Touch iPhone ama. Waxaad qabsan karaan isu geeyo, xaalkaa, iyo resize QuickTime videos, ama ku darto kala guurka, koobab, iyo saamaynta. Iyadoo vimeo Video wanaajiyey, hubaal waad siin doontaa saaxiibadaada la yaab weyn.
9. VidTrim (Waayo, Android Phones)
Waxaa la aqoonsan yahay Tifaftiraha movie QuickTime ugu fiican oo lacag la'aan ah Android isticmaala. Waxaad u isticmaali kartaa si resize video, darto saamaynta ama music aad videos. Xitaa waxa loo isticmaali karaa si ay u soo saaro music ka filimada QuickTime ama badalo QuickTime video in MP4. Just leeyihiin tani editor Quicktime Video ku saabsan qalab Android aad oo wuxuu ku raaxaysan video tafatir ku tago!
Magisto waa xor ah oo si sahlan loo isticmaali online QuickTime video editor. Waxaa jira tallabooyin 3 oo keliya in la sameeyo video ah Pro. Kaliya Waxaad dooran kartaa sawiro ama videos aad, doortaan mawduuc bixiyo ka dibna ku dar music aad ugu jeceshahay. Sidoo kale qalab bixisaa sida ugu dhaqsaha badan si aad ula wadaagto saxar QuickTime video in asxaabta iyo qoyska.
Hel Professional & Advanced QuickTime ah Video Editor
Free QuickTime video tifaftirayaasha kor lagu soo sheegay oo kaliya siiyaan qaar ka mid ah qalabka tafatirka video aasaasiga ah. Haddii aad rabto in aad editor a badan oo horumarsan, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxay noqon karaan doorasho wanaagsan.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (Windows & Mac)
Oo dhan hawlaha video tafatirka classic sida goo, dalagga, zoom, cut, kala jiraan.
Dheellitir dhalaalka, ciyaaro xawaaraha, bedesho mugga audio, garoonka, libdhi ku / libdhi baxay saamayn.
Codso saamaynta video gaar ah sida usii-wareejin, ka horimaanaya, isku dari kara humaag, sawir la qaboojiyey, iyo in ka badan.
Dhoofinta for web, mobile, DVD iyo isku la YouTube u Upload hal-tallaabo.
OS taageerayaan: OS X 10.6 ama ka dib. Si buuxda u la jaan qaada Mac OS X 10.11 (El Capitan), Windows 10/8/7 / XP / Vista
1. Codso 80 hal abuur leh oo xirfad leh loogu tala galay sida diirada.
2. Dooro 59 saamaynta guurka cajiib ah.
3. 19 saamaynta kala duwan mashquuliya customizable text heli karo.
4. 13 rayn iyo pro-raadinta intros & credits arrimo la siiyaa.
5. xulashada badan oo codad.
6. Samee miniatures hungo & xiiso leh Saamaynta Janjeeri-Shift.
7. Ka codso Muuse in qasayo baxay video ah.
Top 3 Video Editors Bilaashka ah ee iPad, iPhone, iPod Touch
Top 10 Best Video Editors Online u Video ayeey Online
Top 5 iPhone Photo ayeey Apps u Edit Photos on iPhone
Sida loo Edit Video Faylal ay ku Mac OS X Yosemite
Sida loo Beddelaan WTV in MPEG
> Resource > Video > Top 10 Free QuickTime Movie Editors